You are here: Home somal Madaxwaynaha jamuuriyada somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta xadhiga ka jaray dhismo cusub oo loo dhisay wasaarada dhalinyarada ciyaaraha.
Munaasibada balaadhan oo loo qabtay xadhig ka jarida dhismahan ayaa waxa kasoo qayb galay madaxwaynaha somaliland xubno ka socday golaha wasiirada labada gole qaran iyo marti sharaf kale. ugu horen munaasibada wax ka hadlay agaasimaha guud ee wasaarada
Maanta dhamaanteen waxa ay inoo tahay maalin wayn waa malintii loo asteeyey dhalinyarada reer somaliland,waa maalintii shacabka reer somaliland ka dhiidhiyeen xadhigii lagula kacay dhalinyaradii (UFO)munaasibadan aynu maanta is kugu nimi waxa ay daarantahay maalinta xadhig ka jarida wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha dhagax dhiga dalada heer qaran ee sonyo iyo daah furka sanduuqa dhalinyarada somaliland.
Agaasimaha dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska somaliland oo hadal kiisa sii wata ayaa waxa uu intaas ku daray.
“Mudanayaal waxa maanta marag madoon ah in xukuumada uu hogaaminayo madaxwaynaha somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay qaaday dhabadii wax qabadka taas oo maanta aad aragtaan in ay hoos joogno fooqan labada dabaq ah ee laga dhisay miisaaniyada dawlada.
Sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dalada dhalinyarada somaliland ee sonyo Mabaarig Ismaaciil Taani ayaa sheegay in ay maanta utahay dhalinyarada reer somaliland maalin utaabo gashay xasuusna ubaahan in markasta la xuso dhalinyaradii naftooda u hurtay qaran nimada somaliland -
“Mudane madaxwayne waxaanu maanta kaaga mahad naqaynaa inaad maalinta taabo gala u noqotay dhalinyarada reer somaliland aad ku maamuusto xadhigana uga jarto wasaaradii dhalinyarada waana maalin tariikhda kuu gali doonta.
Guddoomiyaha dalada dhalinyarada somaliland ee sonyo ayaa waxa uu intaasi ku daray in maanta dhalinyarada reer somaliland ay sharaf wayn utahay inuu madaxwaynihii qaranku ku dhiirado xadhigana maanta ka jaro sanduuqii dhalinyarada reer somaliland.
“Waxa maanta dhalinyarada reer somaliland sharaf u ah inaad madaxwayne ku dhiirato xadhigana ka jarto sanduuqa dhalinyarada reer somaliland oo ay kasoo shaqeyeen wasaarada dhalinyarada ciyaaraha iyo dalada heer qaran ee sonyo.
Wasiirka hawlaha guud gadiidka iyo guryanta somaliland mudane Cabdi Risaaq Khaliif Axmed oo isna munaasibada ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha loo dhisay wasaarada dhalinyarada iyo ciyaarahu uu ku biiri doonto hantida ma guurtada ah ee uu qaranka somaliland leeyahay.
“Mudane madawayne wax noo sharaf ah inaad nagala soo qayb gasho xadhigana ka harto dhismaha cusub ee loo dhisay wasaarada dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska somaliland wasaaradan oo ku biiri doonta hanti qaranka somaliland leeyahay ee ma guurtada ah.
Wasiirka qorshaynta,wasiirka warfaafinta iyo wasiirka maaliyada somaliland ayaa Iyana dhamaantooda ka maro kacay inuu dhismahani waxbadan ka tari doono dhalinyarada reer somaliland waxaana madaxwaynaha ku amaneen inuu ka dhabeeyey balan qaadkii markii uu mucaaradka ahaa ubalan qaaday dhalinyarada somaliland xadhigana maanta ugua jari doono.
Wasiirka dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska somaliland Mudane Cali Siciid Raygal ayaa sheegay intii uu xilka haye in ay wasaaradu ku talaabsatay horumar lataaban karo kuwaas oo carab dhabay goobkii gobolada dalka oo markii u horeysa ay kasoo qayb galeen 13gobol ee uu ka kooban yaha dalka jamuuriyada somaliland.
“maanta madaxwayne waxa inoo wada sharaf ah in dhalinyaradii somaliland meel lagu mauujiyey waxqabadkii xukuumaduna uu noqoday mid shacabka reer somaliland tusay dhabaha lagu gaadhi karo guul,mudane madaxwayne wasaarada ciyaaraha intaan xilka hayey waxa suuro galay in 13ka gobol ee ku kooban yahay dalka somaliland ay kasoo qayb galeen tartanka gobolada ee ka dhacay caasimada somaliland ee hargaysa,dhismaha iyo dayac tirka garoonada kubada lagu ciyaaro iyo kuwa foolida ah lagu sameeyey mudane madaxwayne waxay dhan yihii 15 garoon.
Gabo-gabadii waxa soo kunaanada munaasibada madaxwaynaha jamuuriyada somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kaas oo sheegay in dhalinyaradu tahay mustaq balka dalka,isla markaana dalka somaliland uu ku faanayo dhalinyaradiisa.
“dhalinyarada iyo horu markeedu waa wax yaabaha asaaska u ah mustaq balka dal ku faano dal waliba waxa uu ku fanaa am hore ugu maraa waa dhalin yaradiisa waxaanu rajaynaynaa am aanu ilaahay ka baryaynaa inuu dalkeenu iyo dhalinyaradiisu ay hano qaado dalka iyo dadkaba anfacdo.
Madaxwaynaha somaliland mudane axmed maxamuud siilaanyo ayaa sheegay inuu ah miyada ugu wayn siinayo wasaarada dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska somaliland iyo barnaamijyada ay wado mustaqbalna uleh dhalinyarada reer somaliland waxaana uu sanduuqa horu marinya dhalinyarada reer somaliland ugu deeqa madaxwaynuhu 100kun oo dollar.
“sidaas daraadee ahmiyada wayn ayaanu siinaynaa barnaamijyada ay wado wasaarada dhalinyarada iyo ciyaarahu si ay dhalinyarada reer somaliland ay ugadhaan guul waxaana sanduuqa horumarinta dhalinyarada reer somaliland ugu deeqayaa 100kun oo dollar waxaanu jecel nahay ganacsatadan ugu baaqaynaa in ay dhalinyarada reer somaliland garab galaan sanduuqaas horumarinta ugu deqaan ganacsatadu. -